MIC approves 12 more investments | Myanmar Business Today
HomeBusinessMIC approves 12 more investments
Covid-19 ကာလအတွင်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု(၁၂)ခုထပ်မံခွင့်ပြု
Covid-19ဖြစ်ပွားနေသောကာလအတွင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝင်ရောက်ရာ၌ အရှိန်အဟုန်မပျက်စေရန် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု(၁၂)ခုထပ်မံခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ခွင့်ပြုလိုက်သော လုပ်ငန်းများ၌ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု(၈)ခု၊ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု(၄)ခုပါဝင်ပြီး၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတွင် အိမ်ယာအဆောက်အဦးကဏ္ဍ(၁)ခု၊ စက်မှုကဏ္ဍ(၅)ခုနှင့် အခြားကဏ္ဍမှ(၂)ခု၊ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတွင် စက်မှုကဏ္ဍ(၁)ခု၊ အိမ်ယာအဆောက်အဦးကဏ္ဍ(၁)ခု၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကဏ္ဍ(၁)ခုနှင့် အခြားကဏ္ဍမှ(၁)ခုတို့ဖြစ်သည်။
Covid-19 ကူးစက်ရောဂါစတင်တွေ့ရှိခဲ့သော မတ်လကုန်မှလက်ရှိမေလဆန်းပိုင်းအထိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝင်ရောက်စေရန် နှစ်ကြိမ်တိုင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုခွင့်ပြုခဲ့သော လုပ်ငန်း(၁၂)ခုအပါအဝင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်း(၃၇)ခုကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
လက်ရှိ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝင်ရောက်ထားမှုမှာ လုပ်ငန်းပေါင်း(၁၆၂)ခုမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကန်ဒေါ်လာ(၃ဒသမ၃)ဘီလီယံကျော်ဝင်ရောက်ထားပြီး နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်း(၇၃)ခုမှ ကန်ဒေါ်လာ(၂၅၃)သန်းကျော် အပါအဝင် ကျပ်(၁၂၅)ဘီလီယံကျော်ဝင်ရောက်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ စာရင်းများအရသိရသည်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ပက်သက်၍ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော Covid-19 ကြောင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ရပ်ကို မတ်လဆန်းပိုင်းတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစီမံကိန်း တွက်ချက်မှုအရ ကာလတိုငါးနှစ်ဖြစ်သော ၂၀၁၆-၁၇ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၁ခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ်ကန်ဒေါ်လာ(၅ဒသမ၈)ဘီလီယံ) ဝင်ရောက်ရန် ခန့်မှန်းထားပြီး ယင်းလျာထားချက် ပြည့်မှီရန် ကျန်ရှိသောငါးလတာကာလအတွင်း ကန်ဒေါ်လာ(၂ဒသမ၅)ဘီလီယံခန့်ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်သည်။
ကုန်ဆုံးခဲ့သော ၂၀၁၈-၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှုမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၄ဒသမ၅)ဘီလီယံသာ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ စာရင်းများ အရသိရသည်။
Myanmar Investment Commission announced that it has approved eight foreign direct investments and four local investments amid COVID-19 outbreak in order to strengthen the investments in the country.
One of eight foreign direct investments are made into housing development sector, five in industrial sector and two in other sectors while one local investment was made into industrial sector and each in housing development sector, oil and gas sector and other sector.
The commission has approvedatotal of 37 local and foreign direct investments as of early May since March, when the country first found the Covid-19 confirmed case.
Since beginning of the Fiscal Year, the country has received 162 foreign direct investments totalling $3.3 billion investments and 73 local investment totalling $253 million and K125 billion.
The country has founded an emergency working committee to mitigate impact of Covid-19 outbreak on investment and economy in early March.
According to Myanmar Investment Plan, the country asashort-term goal targets to receive $5.5 billion annually between 2016-2017 fiscal year and 2020-2021 fiscal year.
In 2018-2019 fiscal year, the investment into the country fall short the target $5.5 billion as it only received $4.5 billion.
Previous articleစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ အတိုးနှုန်းများကို မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြို့ရေးဘဏ် လျှော့ချကောက်ခံမည်
Next articlePart of Rakhine State regains internet access after one year